I-Magnolia Suite - Ashford Acres Inn
I-Magnolia Suite ihlinzeka ngendawo yokuhlala enhle yaseKentucky B&B enobuhle bangempela baseningizimu. Itholakala esitezi sesibili ngaphambi kwendlu, i-Magnolia Suite ingelinye lamasudi ethu ezivakashi avuleke kakhulu anendawo yomlilo yegesi kanye nombhede othokomele, wesitayela se-19th Century.
Leli gumbi liqokwe ngemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, noluhlaza olukhanyayo, leli gumbi liqanjwe ngesihlahla seMagnolia esihlala ngaphandle nje kwefasitela. Iphasishi elincane liholela endlini yokugezela yangasese ehlotshiswe nge-American nostalgia yasekuqaleni kweminyaka yawo-1900. I-Magnolia Suite inezingubo zikanokusho, ezithambile; izingubo ezipholile kanye nama-slippers; ithelevishini ehlakaniphile enesikrini esiyisicaba; i-inthanethi engenantambo; izilawuli lokushisa; nezinto zangasese ezinephunga elimnandi, ezinobungani bemvelo.Bukela imuvi esofeni elithokomele, jabulela inkomishi yekhofi ngenkathi ubuka le ndawo ngefasitela lakho, noma ufudumeze izinzwane zakho eduze neziko. Noma ngabe yini oyifunayo lapho uhlala nathi, iMagnolia Suite izokusiza ukuthole.